विद्यार्थीलाई से’’ क्स गर्न सिकाउने यस्तो स्कुल ! पुरा हेर्नुहोस्… – Namaste Dainik
June 26, 2020 July 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on विद्यार्थीलाई से’’ क्स गर्न सिकाउने यस्तो स्कुल ! पुरा हेर्नुहोस्…
पछिल्लो केही वर्षयता पश्चिममा यौ’न विषयलाई समाजले सहज ढंगले लिन थालेका छन् । यसबारेमा सबै जानकार हुनुपर्नेभन्दै आवाज उठ्न थालेका छन् । यौ’न क्रियाकलापको बारेमा प्रयोगात्मक रुपमा जान्न चाहनेहरुको लागि विद्यालय नै खुलेको हो ।
अस्ट्रियाको राजधानी भियना नजिकै एउटा यस्तो स्कूल छ, जहाँ विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक रुपमै से’क्स गर्न सिकाइन्छ ।उक्त विद्यालय जहाँ सन् २०११ देखि यौ’न विषयमा प्रयोगात्मक रुपमै पढाइ हुन्छ । उक्त स्कुलको नाम ‘भियना से’क्स स्कूल’ हो ।
स्कुलका अनुसार यहाँ विद्यार्थी भर्ना गरी से’क्सका बारेमा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गरिन्छ । यहाँ ब्यबहारिक रुपमै से’क्स सिकाइने दा’वी गरिएको छ ।उक्त विद्यालयमा गृहकार्य समेत से’क्स नै हुन्छ । यो स्कुलमा पढ्नका लागि एक सत्रको १४ सय बेलायती पाउण्ड भर्ना शुल्क लाग्छ ।
यस स्कूलमा युवायुवती मात्र भर्ना हुन पाउने व्यवस्था छ । यो स्कुलमा छात्र छात्राको छुट्टाछुट्टै छात्राबास छैन । एउटै होस्टेलमा, अझ भनौं एउटै कोठामा पनि केटाकेटी बस्न पाउने सुविधा छ ।यसो गर्नुको खास कारण भनेको विद्यालयमा पढाइने यौ’न सम्बन्धी पाठहरु उनीहरुले कोठामा गएर व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने नै हो ।
स्कूलका संस्थापक तथा प्राचार्य एल्वा मारिया थम्पसन हुन् । शारीरिक सम्बन्धलाई प्राकृतिक आवश्यकता मानिने गरिन्छ भने शारीरिक सम्बन्धलाई प्राकृतिकलाई एकीकृत राख्ने एक प्रक्रियाको रुप धेरैले वर्णन गर्ने गरेका छन्। धार्मिक आस्था अनुसार पनि शारीरिक सम्बन्धलाई प्राकिर्तिक अपरिहार्यताको रुपमा बताउने गरिन्छ।
तर शारीरिक सम्बन्धको लागि हिन्दु धर्मको छुट्टै विश्वास गर्ने गर्छ।शास्त्रका अनुसार शारीरिक सम्बन्ध पछि बस्न गएको ग’र्भमा रहेको बच्चा कस्तो हुन्छ भने ग’र्भ उपनिषदको माध्यमबाट जान्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। धार्मिक शास्त्र अनुसार हप्ताका केहि तिन दिन शारीरिक सम्बन्ध बनाउनको लागि शुभ मानिने गर्दैन।
यी तीन दिनहरुमा शारीरिक शारीरिक सम्बन्ध राख्न र गर्वधारण गर्नको लागि शुभ मानिंदैन।मंगलवार,शनिवार र आइतबार शारीरिक सम्बन्ध बनाउन खासै शुभ नहुने बताउने गरिन्छ। यी तीन दिनमा शारीरिक सम्बन्ध राख्दा गर्वधारण भएमा जन्मने बच्चा धेरै नै घमण्डी हुने गर्छन्।
साथै स्वास्थ्यको हिसाबमा पनि यस प्रकारमा बच्चाहरु कम्जोर हुने विश्वास गर्ने गरिन्छ। यस्तै विज्ञानले पनि सबै भन्दा धेरै प्राय जोडी बिहिबार शारिरीक सम्बन्ध बनाउन मन पराउने गर्छन्।